The Ab Presents Nepal » दसगजामा भारतले भुमि मिचेर प्रहरी चौकी बनाएपछि नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल पुगे प्रतिकार गर्न, गरे भारतको कडा बिरोध!
दसगजामा भारतले भुमि मिचेर प्रहरी चौकी बनाएपछि नेकपाका नेता घनश्याम भुसाल पुगे प्रतिकार गर्न, गरे भारतको कडा बिरोध!
बुटवल, १० साउन -: भारतले नेपाली सिमाना मिचेर प्रहरी चौकी नै निर्माण गरेपछि सांसद घनश्याम भुषालले सो क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् । रुपन्देहीको बेलहिया क्षेत्रमा भारतले सिमाना मिचेर प्रहरी चौकी निर्माण गरेको हो । भारतीयको ज्यादतीवाट आक्रोशित भएका स्थानियले सो सम्बन्धि जानकारी गराएपछि उनी निरिक्षणमा गएका हुन् । दुई देशकाबीचमा रहने दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतले प्रहरी चौकी निर्माण गरेको हो ‘।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सीमा स्तम्भबाट नेपालतर्फ २१ फिट जग्गा रहेको ठाउँमा भारतले प्रहरी चौकी निर्माण गरेको हो । सीमा क्षेत्रको दशगजाको ३० फिट सीमामा संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन। सो मान्यता विपरीत भारतले प्रहरी चौकी निर्माण गरे पछि स्थानिय आक्रोशित भएका छन् ।
भारतले प्रहरी चौकी नै निर्माण गरेपछि जमिनको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद सिर्जना भएको छ। नेपालको सडक विस्तारका क्रममा केही सरकारी कार्यालय भत्काउने क्रममा भारतले दशगजामा नै संरचना निर्माण गरेको पत्ता लागेको थियो’ ।
सीमा मिचिएको बारेमा भैरहवावासीले सो क्षेत्रका प्रतिनिधि सभा सदस्य घनश्याम भुसाललाई जानकारी गराए । त्यसपछि उनी बिहिवार नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र सीमा सुरक्षा गणका प्रतिनिधि लिएर निरिक्षणका लागि गएका थिए । उनले नेपालको छुटेको जमिनको नापजाँच गरिएको बताएका छन् ।
निरिक्षण पछि सांसद भुषालले दुई देशबीचको समस्या भएकाले कुटनितिक रुपमा सो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानिय प्रशासनलाई त्यसको पहल गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । सांसद भुसालले भने,यो समस्यालाई स्थानीय प्रशासनले आफ्नो तहबाट भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर सुल्झाउन प्रयास गर्नुपर्छ। यस बारेमा मैले संघीय संसदमा कुरा उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।